Android Photo Recovery - Naghachi ehichapụ Photos si gam akporo
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si gam akporo ntị na mbadamba
E nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-atụfu photos na gị android ngwaọrụ. Kasị nkịtị na otu onye bụ mberede nhichapụ. Ma ị na-eme ya onwe gị ma ọ bụ nwa gị na mberede taps ihichapụ na gị android ngwaọrụ, nke a bụ ihe kasị nkịtị ụzọ ida photos nakwa dị ka ndị ọzọ data na ekwentị gị. Ụzọ ọzọ ị nwere ike ida foto na ngwaọrụ gị bụ ọ bụrụ na ị na-echekwara ha na gị na MicroSD na mgbe ahụ ị hapụ nchekwa ngwaọrụ. A na-eme ndị ọzọ mgbe na ị na-eche na ọ bụ otu n'ime ndị kasị ike ọgwụgwụ ụzọ ida data n'ihi na ọ bụ ihe fọrọ nke nta unsalvageable.
Ma eleghị anya, ọ dịghị ihe ọzọ nkịtị ma nnọọ oké njọ ụzọ hapụ gị photos na ndị ọzọ na data na ekwentị gị bụ mgbe data na gị Android ekwentị na mberede overwritten. Ọ na-adịghị eme mgbe mgbe ma mgbe ọ na-eme, ọ bụ nnọọ ike ịbụ na ị gaghị na-data azụ.
The n'elu ihe bụ kpọmkwem ihe mere i kwesịrị nwere ndabere niile data na ekwentị gị. Otú a, ma ọ bụrụ na ị hapụ ya, ị pụrụ n'ụzọ dị mfe inwe ya laghachi azụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eme ida foto gị na ị na-adịghị a ndabere, e nwere ndị ka ụzọ i nwere ike inwe foto gị azụ.
O doro anya na ị chọrọ a obere enyemaka na-gị na mberede ehichapụ photos azụ, nri? Ọfọn, otú banyere ihe na-enyemaka si ụwa 1st data mgbake software. Wondershare Dr. Fone maka Android ga-enyere gị na-ụdị ọ bụla nke na-ehichapụ data site na ekwentị gị gụnyere ozi, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, videos na ndị ọzọ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị na-adịghị na-eji oge na-amụta otú e si eji ya; ọ na-arụ ọrụ dị nnọọ mfe, na-agbake gị data nile na otu click.
Nke a software akwado 2000+ android ngwaọrụ otú ị na-adịghị ka nchegbu banyere ekwentị gị ịbụ dakọtara.
Nkuzi: Olee naghachi ehichapụ Pictures si gam akporo mkpanaaka na & n'Ụrọ
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata na ịwụnye Wondershare Dr. Fone. Ozugbo arụnyere, ị kwesịrị ị na jikọọ gị Android ekwentị gị na kọmputa na iji USB cables. Ọ dị mkpa na ị hụ na gị na ekwentị batrị larịị bụ dịkarịa ala 20% n'ihi na ị na-enwe ike ime nke a n'ụzọ dị mfe. Ozugbo gị jikọọ ekwentị, ị kwesịrị ị na-ahụ nke a window.
The ọzọ ihe bụ debug gị android ngwaọrụ. Eso ndị a na-eme otú ahụ, a ga-adabere na version nke Android ị nwere na ngwaọrụ gị.
• N'ihi Android 2.3 ma ọ bụ tupu, ị kwesịrị ị pịa Ntọala wee Ngwa. Wee pịa na Development na ego igbe akara USB debugging.
• Ọ bụrụ na ị na-agba Android 3.0 4.1, Pịa na Ntọala, mgbe ahụ, Development nhọrọ na mgbe ahụ ego igbe akara USB debugging
• N'ihi nsụgharị ọhụrụ karịa 4.2, Pịa na Ntọala, mgbe ahụ, About ekwentị. Enweta na "Mee Number" ọtụtụ ugboro ruo mgbe ị ga-esi a odide na-ekwu, ị bụ n'okpuru Mmepụta mode. Mgbe ahụ, pịa azụ Ntọala na mgbe ahụ Mmepụta nhọrọ na-elele USB debugging igbe.
The Wondershare Dr. Fone software ga chọpụta gị android ngwaọrụ ma nyochaa ya. Pịa Malite na-ekwe ka software iji nyochaa ngwaọrụ gị. The analysis ga-dị nnọọ a nkeji ole na ole.
A arịrịọ ga-gbapụta na ekwentị gị ma ọ bụ ngwaọrụ. Pịa na Kwe Ka-eme ka ọ n'ihu. Nke a na-enye ohere software mezue a miri emi Doppler nke ngwaọrụ gị.
Ozugbo miri analysis zuru ezu, mmalite button ga-apụta ọzọ dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe oyiyi n'elu. Pịa na ya na usoro ihe omume ga otu ugboro ọzọ ime a miri Doppler nke ma gị SD kaadị na esịtidem ebe nchekwa. Niile data na ike ga-weghachiri eweghachi ga-eweghachi ozugbo.
Nanị ịhọrọ foto ị chọrọ iji naghachi na ị ga-ha azụ ozugbo.
Olee otú foto na-echekwara na Android ntị na mbadamba
E nwere a na ụzọ abụọ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-azọpụta photos ha igwe. Ha ga-ma iji mpụga kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ esịtidem ebe nchekwa.
1. mpụga ebe nchekwa kaadị
Ọtụtụ ndị amara a n'ụdị nchekwa n'ihi na ha na-eche na foto ndị salvageable na ike ga-Ewepụtara site na ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ n'oge ọ bụla. Ezie na nke a bụ nnọọ eziokwu, ọ bụkwa eziokwu na gị ga-kaadị MicroSD achụpụlighị site na ekwentị na oge obula, ị na-eguzo na ohere nke adịkwa obere nchekwa na ngwaọrụ. Adịkwa gị SD kaadị pụtara na ị hapụ niile nke gị photos dị ka mma.
2. esịtidem ebe nchekwa
Ọtụtụ n'ime oge ndị mmadụ adịghị ahọrọ iji esịtidem ebe nchekwa na ha igwe; ọ bụ mgbe a ndabere nhọrọ. Ezie na ọ pụrụ ịbụ mfe dị nnọọ ekwe ka gị na ekwentị nchekwa na-echekwa gị niile foto, ọ bụ a ihe ize ndụ uru. N'ihi ya, ọtụtụ ihe nwere ike ime na-edu ọnwụ nke foto gị. I nwere ike na mmadụ na mberede ihichapụ ha ma ọ bụ onye overwrite pụrụ ịkpata ọnwụ nke gị niile foto.
Olee otú iji zere adịkwa foto na Android
E nwere ọtụtụ ụzọ iji zere adịkwa foto gị. Ihe kacha bụ ike a ndabere maka foto gị. Na taa ígwé ojii ọrụ, ị pụrụ ime nke a nnọọ mfe na ngwa ngwa. Android ngwaọrụ nwere a na nkwado ma weghachite ntọala na-eji gị Google akaụntụ. Bụ nke a mere ị ga-jụrụ n'ihi na gị Google ID na paswọọdụ mgbe mwube gị Android ngwaọrụ. Ya mere, ị nwere ike iji Google Back ruo ndabere gị photos mfe. A bụ otú. Tupu anyị na-akọwa usoro, ọ dị mkpa iburu n'obi na gị Google ndabere ga-akpaghị aka na-emelite oge ọ bụla ị na-photos.
Ime ka syncing, pịa Photos wee họrọ ntọala.
Mgbe ahọrọ akpaaka nkwado ndabere na mpaghara gbanye ya, ọ bụrụ na ọ bụ na-adịghị ama on.
Na-esonụ window, ịhọrọ size. Ị nwere ike ịhọrọ Standard ma ọ bụ Full size. Ịhọrọ ọkọlọtọ-enye gị ohere na-akparaghị ókè free nchekwa.
Dị nnọọ ka i guzobere Google syncing na oge ọ bụla ị na-ese foto, ị ga-akpaka azụ elu.
6 kasị akpali akpali atụmatụ maka Android 5.0 Lollipop
5 Nzọụkwụ naghachi ozi ederede site na Nexus 6
3 Atụmatụ i kwesịrị ịma mgbe ị na-ịzụ Android égwu
> Resource> Android> Olee naghachi Photos ehichapụ Android ekwentị mkpanaaka na